Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q7aad | Warsugan News
Home Maqaalo Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q7aad
Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q7aad
Dec 18, 2015Maqaalo
“Dhibtayda kuwaa ka dhuumanayow,
Dhagaxaa ii damqan laa dhadhaabta ah,”
Mar keliyaa ayaan arkay muuqii iyo dareenkii Mujaahid Bashiir oo is-beddelay. Waxaan arkay isagii oo is-beddelay. Inta aan naxay ayaan markiiba weydiiyay waxa ku dhacay. Waxaanu iigu jawaabay: ‘Heestan miyaanad maqlayn innaga ayay inala hadlaysaaye.” Wuxu intaa ku dabo-karay ninka Makhaayadda leh inoo weydii oo inooga soo qaad, sidiina waan yeelay oo waan ka soo qaaday si aanu boogaha iyo nabarrada ballan-darrada ugu dheyno uguna baananno.”
Waxaynu weli maalaynaa gaaxdii xusuuseed ee Mujaahid Maxamed Oomaar. Waa dhacdo kale oo la yaab leh. Maxamed oo sheekadan marinayaa, wuxu yidhi: “Mujahid Bashiir ayaa fuulay Bas uu is-lahaa Gol-janno u raac. Waa uu iska fadhiistay isaga oo sugayay inta uu buuxsamayo. Bashiir oo fadhiya oo sugaya inta uu Basku buuxsamayo, ayuu mar keliya ku war helay Mujaahid hore uga tirsanaan jiray Unugtiisii Sahanka ee Diibiile oo cadowga isu soo dhiibay ama soo galayba oo siro badan bixiyay. Labadood indhood ayaa si buuxda oo aan mugdi lahayn isugu dhacay.
Bashiir ayaa markii uu ninkii si dhab ah u aqoonsaday, Baskii ka degay oo hortiisa fadhiistay. Gaadh ayuu ka hayay ilaa intii uu Basku buuxsamayay. Wuxu iska ilaalinayay in uu ogaado halka uu Baska kaga degayay. Baastooladdii ayuu cabbaystay, waxaanu go’aansaday haddii uu ka soo dabo-dego in uu qudha kaga jaro. Ilaa intii uu Baski dhaqaaqayay wuu hor taagnaa. Ninku cadow sirtii SNM ee weliba Sahanka nin la soo tallaabay ayuu ahaa. Sidii ayuu Baskii ku dhaqaaqay. Maalin iyo laba ka dib ayaanu aragnay isaga oo la socda Taliyihii NSS-ta oo warbixintii bixiyay. Ninkii aanu hawl-galka ku fulinaynay ayaa meelihii lagu yaqaannay oo dhan beddelay.”
“Aniga oo habeen habeennada ka mid ahaa gurigayga iska fadhiya oo TV ku daawanaya oo aanay innaba iga qasnayn, ayuu ii soo galay nin SNM ah oo ka tirsanaa kooxdii sahanka ee hawl-galkii Axmed Aadan lagu khaarajiyay. Ninka hore ayaanu isu naqaannay muddo aan fogaynna wuu tallaabay oo SNM ayuu ku biiray. Wuxu iiga sheekeeyay waxay u socdaan isaga oo isla markaana i weydiiyay su’aalo ku saabsan tilmaamaha Axmed Aadan iyo meelaha laga helo.
Maalin ama laba maalmood ka dib aniga oo xafiiskaygii fadhiya ayaa waxa ii soo galay nin go’ shaal ah hagoogan. Ku-ye: ‘Ma i garanaysaa?’ Aniguna: ‘Maya’, ugu jawaabay. Ku-ye: ‘Waxaan ahay Bashiir. Tilmaamihii aad na soo siisay ayaa nagu fillaan waayay. Waxanu u baahannay tilmaamo intaa hore ka badan.’ Naxdintii hore bikh. Ninkan xafiiska iigu soo galay ee Bashiir go’a waxa uga hooseeya oo aan halacsaday: laba bambo iyo baastoolad.
Waxaan ku idhi wixii aan war idin siin karayay waan idin siiyay oo waxba idin kama hagran. Wuxu igu yidhi: ‘Waxaan u baahanahay in aan arko oo la i tuso qofka aan dilayo, maxaa yeelay ma doonayo in aan ku qaldamo cid kale oo aan waxba galabsan’ Yaabkii iyo amankaaggii ayaa igu sii batay. Annaga oo jiq isku ah ayuu noo soo galay Dhamme Maxamuud Ibraahin Guuleed. Sheekadii ayaanu si deg-deg ah ugu marinnay.
Ku-ye: ‘Ina soo saara aniga ayaa soo tusaya e.’ Baabuurkii Dhamme Maxamuud ayaanu wada raacnay. Hargeysa Kilaab markii aanu maraynay, ayuu Dhamme Maxamuud baabuurkii dib u soo kala fireeyay oo yidhi: ‘Aniga iyo Bashiir ayaa raadinayna Axmed Aadan e’, adigu gaadhigaagii ku noqo. Sidii ayay isku raaceen, aniguna aan xafiiskaygii iyo gaadhigaygii kaga hadhay. Iyaga oo guriga shaqaalaha hormaraya oo Axmed Aadan raadcaynaya, ayuu kaga soo baxay guriga shaqaalaha isaga oo markaa soo dhammaystay shir uu ku jiray. Waxoogaa ayay barbar carareen, ka-dibna wuu u joogsaday, iyaguna waa ay dhinac is-taageen. Dhamme Maxamuud ayaa inta uu si wanaagsan Axmed Aadan u salaamay ku yidhi: ‘Meel kasta oo ay joogaanba, dadku waa kaa raalli. Aad ayaa laguugu han-weyn yahay.’ Intaa haddii u ritay ayuu jalleecay Mujaahid Bashiir oo gaadhiga la fuushanaa, waxaanu ku yidhi: ‘Waa kan ninkii Axmed Aadan ee aad ammaanaysay.’ Mujaahid Bashiirna si fiican ayuu indhaha uga buuxsaday, ka-dibna waa ay kala dhaqaaqeen.”
Previous PostBeeniin: la xidhiidha Xaalada Caafimaad ee Xaaji Cabdi Kariim Cabdiwaraabe Next PostDaawo Munaasibad Lagu Xusayay Dhalashada Nabigeena SCW Oo Ka Dhacday Magaalada Arabsiyo